Pretoria Chalet. UThuthuzelo oluzolileyo, isibhedlele esiKufuphi
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguKathryn & Paul
IMIBUTHO IYAGOVA. Iindwendwe ezigonywe kuphela. Ibanzi, igumbi lokulala eli-2 le-chalet. Ibandakanya iLounge, indawo yokutyela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Ibekwe kwigadi enoxolo enedesika kunye nezihlalo.
Ibekwe kwindawo esembindini. Isibhedlele saseHutt, iSikhululo sikaLoliwe saseWaterloo, iQueensgate Mall, iiCafes, iivenkile ezinkulu kunye nemilambo okanye iindledlana zeenduli zonke ii-10-15mins zihamba.
20min ngololiwe ukusuka eWaterloo stn ukuya eWellington.
Imizuzu eyi-15 ukuya eWellington City kunye neCook Strait Ferry. Imizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseWellington
Kulula ukuyifumana, siku-1 km ukusuka kwi-SH2. AKUKHO IMALI YOKUCOCA!
Ilungele iHolide, isibhedlele saseBoulcott, iindwendwe zeSibhedlele saseHutt kunye nabahambi beShishini. I-chalet inika indawo yokuhlala ebanzi, ecocekileyo kwaye ekhululekile. Inekhitshi equka ifriji, imicrowave, itoaster, iketile yombane, kunye necoffee plunger kunye neeglasi, iikomityi, iipleyiti, i-cutlery njl.
Isidlo sakusasa asibonelelwanga nangona kunjalo sinikezela ngeti, ikofu kunye neecondiments. Nceda uqaphele, likhitshi kwaye alina oveni okanye ihotplate.
Igumbi lokulala elikhulu linokukhanya kwesibhakabhaka kunye nebhedi esemgangathweni kaKumkanikazi.
Igumbi lokulala lesibini linebhedi esemgangathweni esemgangathweni.
Zombini iibhedi zine-100% yamaphepha okubalwa komqhaphu aphezulu.
Intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina.
Isifudumezi kunye nokupholisa iFan yombane.
Iinwele zivuthwe kwaye zibonelele ngesixhobo sokulungisa iinwele.
Ukuzihlola ngokwakho kuyafumaneka ukuba asikho kwindawo.
I-chalet ivulekile, nangona kunjalo intuthuzelo yakho kunye nolonwabo imiselwe ubuninzi beendwendwe ezi-3.
Ifriji yeSmall Fisher & Paykel
4.93 · Izimvo eziyi-302
Indawo ezolileyo enamakhaya, iigadi kunye neengoma zeentaka.
Ukuhamba umgama ukusuka kwisibhedlele iLower Hutt, iQueensgate Shopping Mall, iLower Hutt Civic center, isikhululo saseWaterloo (imizuzu eli-10), ibhaso lokuwina icafe kunye nejim umgama omde wemizuzu emi-5. I-Polytech evulekileyo yaseNew Zealand yimizuzu emi-4/5 yokuqhuba ngemoto. Kumgama omfutshane ukuya eMitchell Park Gardens kunye neRacquets Centre. I-Naenae Bowling Club Stadium yimizuzu eli-10 xa uqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Kathryn & Paul
Siyakonwabela ukudibana neendwendwe zethu, siyavuya ukuncokola ngelixa sihlonipha ubumfihlo bakho.
UKathryn & Paul yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lower Hutt